Xulka Sweden oo Xulka Talyaaniga ka reebay Koobka Aduunka 2018-ka eeRuushka ka dhacay.+Sawirro - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Xulka Sweden oo Xulka Talyaaniga ka reebay Koobka Aduunka 2018-ka eeRuushka ka dhacay.+Sawirro
November 14, 2017 | Filed under: WARARKA SOOMAALIYA | Posted by: Maxamuud Axmed
Xulka Kubadda Cagta Talyaaniga ayaa ka haray Koobka Aduunka 2018-ka ee lagu qabanaayo Dalka Ruushka, kadib markii 0-0 la dhaafi waayeen xulka Sweden, Isku darka goolasha labada xulka Sweden ayaa 1-0 ku soo baxeen waxaana wado cad lagu diray tababare Ventura, goolhaye Buffon iyo ragga duqoobay ee Talyaaniga la dageen.
Kulankaan qaybta hore waxaa hareeyay muran ku aadan in garsoore Antonio Mateu uu diiday sedex rigoore oo la isku raacay inay sax ahaayeen markii ku cel celiska kaamirada la daawaday.
Jakob Johansson ayaa daqiiqadii 19-aad dhaawac ku baxay waxaana lagu badalay Gustav Svensson ayadoo Sweden uu ka baxay hogaamiye waaya arag ah.
Immobile ayaa ku dhawaaday inuu shabaqa soo taabto daqiiqadii 40-aad kubad dhex ka dhiib ahayd ayuu goolhayaha dhaafsiiyay balse daafacyada Sweden ayaa iska bixiyeen inta aysan shabaqa gaarin.
Xulka Talyaaniga ayaa culays saareen daafacyada Sweden daqiiqadihii ugu dambeeyay taasi oo sababtay taageerayaasha San Serio ku sugan inay qeylo iyo sacab bilaabaan.
Ciyaaryahan Florenzi ayaa daafacyadaa Sweden soo dhex jeexay daqiiqadii 45-aad balse halkii uu kubada saaxiibadiisa siin lahaa goosha ayuu abaaray waana laga bad baadiyay laadkii uu riday ee jooga hoose ku socday.
Qaybta hore ee cayaarta waxay ku soo idlaatay 0-0 iyadoo Talyaaniga hurdada ka kaceen daqiiqadihii dambe waxaana qasab ah macalin Ventura inuu wiilashiisa ku sii amri doono duulaanka inay Sweden ku hayaan.
Qaybta labaad ee cayaarta Talyaaniga waxay la soo galeen dar dar dheeraad ah weliba Florenzi ayaa ku dhawaaday inuu shabaqa soo taabto daqiiqadii 53-aad.
Tababare Ventura ayaa hal mar garoonka soo wada galiyay S. El Shaarawy iyo Belotti wuxuuna badalay Darmian iyo M. Gabbiadini daqiiqadii 63-aad si weerarka Talyaaniga u sii xoganaado.
Talyaaniga badalkoodii sedexaad ayay sameeyeen waxaana la soo galiyay Bernardeschi daqiiqadii 76-aad ayadoo la badalay Candreva.
Daqiiqadii 87-aad halmar garoonka San Serio waxay u wada istaageen darbad xoogan oo uu El Shaarawy la helay goosha Sweden balse goolhaye Olsen ayaa si geesinimo ku dheehan u bad baadiyay.
Talyaaniga oo duulaan wadaan ayaa waxaa cayaarta lagu daray 5-daqiiqo halka Sweden oo daalan ay ka naxeen garsooraha afaraad daqiiqadaha uu ku daray.
Talyaaniga ayaa koorno heleen cayaarta oo labo daqiiqo harsan xitaa goolhaye Buffon ayaa soo weerar tagay balse kubadii Sweden wey iska difaaceen waxaana darbad goosha kusoo celiyay Jorginho balse banaanka ayay ka martay.
Talyaaniga oo weerar ku jiraan waxay heleen koorno kale cayaarta 15-ilbiriqsi ka harsan waxaana soo tuuray Florenzi xitaa Buffon wuu soo weerar tagay balse kubadii wey qasaartay.
Garsoore Antonio Mateu cayaarta seerigeeda yeeriyay waxayna ku soo idlaatay 0-0 taasi oo sababtay in Talyaaniga gabi ahaanba koobka aduunka isaga hareen.
Dhanka kale Sweden waxay bilaabeen dabaal deg aan caadi ahayn madaama ay 1-0 kusoo baxeen isku darka goolasha labada lug waxayna iska xaadiriyeen koobka aduunka 2018 Russia lagu qaban doono.